Warar - Daraasad Duuliye ayaa soo jeedinaysa in budada yaanyada ay leedahay Faa'iidooyinka Soo kabashada Jimicsiga Sare ee Lycopene
Daraasada Duulimaadka waxay soo jeedinaysaa budada yaanyada inay leedahay Faa'iidooyinka Soo kabashada Jimicsiga Sare ee Lycopene
Ka mid ah nafaqada nafaqada ee caanka ah ee loo isticmaalo in lagu xoojiyo soo kabashada jimicsiga ee cayaaraha, lycopene, carotenoid laga helo yaanyo, ayaa si ballaaran loo isticmaalaa, iyadoo cilmi baaris caafimaad lagu caddeeyo in kaabisyada 'lycopene' saafi ah ay yihiin antioxidant awood leh oo yareyn kara jimicsiga jimicsiga jirka. xag-jiriyeyaasha bilaashka ahi waxay waxyeeleeyaan unugyada iyaga oo "ka xada" elektaroonigga dufanka ku jira xuubka unugga).
Daraasad tijaabo ah oo cusub, oo lagu daabacay Joornaalka Bulshada Caalamiga ah ee Nafaqada Isboortiga, cilmi baarayaashu waxay ujeedkoodu ahaa inay baaraan faa'iidooyinka antioxidant-ka ee lycopene, laakiin si gaar ah, sida ay isugu dheceen budada yaanyo, tamaandho dheeri ah oo u dhow asalkeeda cuntada oo dhan taasoo ka kooban ma aha oo kaliya lycopene laakiin muuqaal ballaaran oo nafaqeeyayaalka yar yar iyo qaybaha kala duwan ee bioactive.
Daraasaddan kala-soocista, laba-indho-la'aanta ah, 11 ciyaartoy si wanaagsan u tababaran ayaa soo maray seddex tijaabo jimicsi oo dhammaystiran ka dib toddobaad ay ku darsadeen budo yaanyo ah, ka dibna dheecaanka lycopene, ka dibna placebo. Saddex shaybaar dhiig (aasaasiga ah, ka dib qaadashada, iyo jimicsiga kadib) ayaa loo qaaday mid kasta oo ka mid ah waxyaabaha dheeraadka ah ee la isticmaalay, si loo qiimeeyo wadarta awoodda antioxidant-ka iyo is-beddelka 'lipid peroxidation', sida malondialdehyde (MDA) iyo 8-isoprostane.
Ciyaartoyda, budada yaanyada waxay kobcisay wadarta awoodda antioxidant-ka ee 12%. Arrin xiiso leh, daaweynta budada yaanyada ayaa sidoo kale keentay hoos u dhac aad u hooseeya ee 8-isoprostane marka la barbar dhigo kaabashka 'lycopene' iyo 'placebo'. Budada yaanyada ayaa sidoo kale si weyn u yareysey jimicsiga dhammaystiran ee MDA marka la barbar dhigo placebo, si kastaba ha noqotee, ma jirin farqi noocan oo kale ah oo u dhexeeya lycopene iyo daaweynta placebo.
Iyada oo ku saleysan natiijooyinka daraasadda, qorayaashu waxay ku soo gabagabeeyeen in faa'iidooyinka aadka u weyn ee budada yaanyada ay ku leeyihiin awoodda antioxidant iyo jimicsiga jimicsiga ee jimicsiga laga yaabo inay keeneen isdhexgalka isdhexgalka ee u dhexeeya lycopene iyo nafaqooyinka kale ee bioactive, halkii laga heli lahaa lycopene ee go'doon qaab.
"Waxaan ogaanay in kaabista 1-toddobaad ee budada yaanyada ay si wanaagsan u kordhisay wadarta awoodda antioxidant-ka waxayna ahayd mid aad u awood badan marka la barbardhigo dheecaanka lycopene," qorayaasha daraasadda ayaa yiri. Isbeddelladaan 8-isoprostane iyo MDA waxay taageerayaan fikradda ah in muddo gaaban, budada yaanyo, oo aan ahayn maaddada loo yaqaan 'lycopene' ay leedahay awood ay ku yareyso jimicsiga ay keento lipid peroxidation-ka. MDA waa biomarker ee qiiqa oksida wadarta barkadaha baruurta leh laakiin 8-isoprostane wuxuu ka tirsan yahay fasalka F2-isoprostane waana biomarker lagu kalsoon yahay falcelinta xagjirka ah taasoo si gaar ah uga tarjumeysa qiiqa arachidonic acid. ”
Iyada oo ay kooban tahay muddada daraasadda, qorayaashu waxay qiimeeyeen, si kastaba ha noqotee, in mudada dheeriga ah ee kaabista ee lycopene ay sababi karto faa'iidooyin antioxidant oo xoog leh oo nafaqada go'doonsan, iyadoo la raacayo daraasado kale oo la fuliyay muddo dhowr toddobaad ah. . Si kastaba ha noqotee, yaanyada oo dhan waxaa ku jira iskudhaf kiimiko ah oo kobcin kara natiijooyinka waxtarka leh ee isdhexgalka marka la barbar dhigo hal xarun, qorayaashu waxay yiraahdeen.
Waqtiga boostada: Apr-12-2021